ओ-मिक्रोनपछि फेरि देखियाे अर्काे ख`तरनाक भेरिएन्ट, हरेक ३ संक्रमितमध्ये एक जनाको मृ-त्यु हुने ! – List Khabar
Home / समाचार / ओ-मिक्रोनपछि फेरि देखियाे अर्काे ख`तरनाक भेरिएन्ट, हरेक ३ संक्रमितमध्ये एक जनाको मृ-त्यु हुने !
ओ-मिक्रोनपछि फेरि देखियाे अर्काे ख`तरनाक भेरिएन्ट, हरेक ३ संक्रमितमध्ये एक जनाको मृ-त्यु हुने !
admin January 29, 2022 समाचार Leaveacomment 205 Views
ओ- मिक्रोन भेरियन्टले विश्वलाई त्र-सित बनाइरहेको छ । यो आ-तंक मत्थर हुन पाएकै छैन, को-रोनाकै अर्को भेरियन्ट ‘नि-योकोभ’ फैलिने जोखिम रहेको चर्चा हुन थालेको छ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले उक्त ख-तरनाक भेरियन्ट फैलनसक्ने भन्दै सर्तक रहन सुझाव समेत दिएका छन् ।
ओ-मिक्रोनपछि को-रोनाको नयाँ ख-तरनाक भेरिएन्ट फेला परेको छ । चीनको वुहानका वैज्ञानिकहरुले नयाँ भेरिएन्ट नियोकोभ निकै ख-तरनाक भएको दावी गरेका छन् । न्यूज १८मा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार, दक्षिण अफ्रिकामा फेला परेको नियोकोभ नामक नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमण र मृ- त्यु दर नि बढी छ । यसमा हरेक तीनजना बिरामीमध्ये एकको मृ- त्यु हुने उनीहरुको दावी छ ।
तर रुसको समाचार एजेन्सी स्पु`तनिकले भने यो भेरियन्ट नयाँ नभएर को-रोनाकै मर्स कोभ भाइरससँग जोडिएको बताएका छन् । सन् २१०२ र २०१५ मा पश्चिम एशियाली देशहरुमा यसका बिरामी देखिएका थिए । दक्षिण अफ्रिकामा भने अहिले यो नियोकोभ भेरिएन्ट चमेरोहरुमा देखिएको छ ।
बायोआरएक्सआइभी वेभसाइटमा प्रकाशित शोधका अनुसार, नियोकोभ र यसका सहयोगी भाइरसPDF-2180-CoV ले मानिसलाई पनि संक्रमित बनाउन सक्छन् । वु-हान युनिभर्सिटी र चाइन एकेडेमी अफ साइन्सेजका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, यो नयाँ को-रोना भाइरसले मानिसको कोषलाई संक्रमित गर्न एकपटक म्यूटेशन गरे पुग्छ । केही दिनअघिसम्म ओ- मिक्रोनको सब स्ट्रेन बिए २ ले आतंक फैलाएको थियो ।
ओ- मिक्रोनका यी सहायक भेरियन्ट निकै ख-तरनाक छन् किनभने यिनलाई आरटी पिसिआरले पनि नदेखाउन सक्छ । अहिलेसम्म यो नयाँ सब भेरिएन्ट भा-रतलगायत संसारका ४० देशमा फैलिसकेको छ । भाइरसको नयाँ भेरियन्ट नियोकोभलाई लिएर चीनका वैज्ञानिकले विश्वलाई चे-तावनी दिएका छन् । यो भेरियन्टको बारेमा शोध गर्ने वैज्ञानिकले भनेका छन्, ‘यो नयाँ भेरियन्ट एकदमै बढी संक्रामक र ख-तरनाक छ ।’
वैज्ञानिकले यस नयाँ शोधलाई वेबसाइटमा प्रकाशित गरेका छन् । शोधपत्रमा भनिएको छ, को- रोनाको नयाँ भेरियन्ट नियोकोभ र त्यसको सहयोगी भेरियन्ट पीडीएफ–२१८० को-भले मान्छेलाई एकदमै तीव्र रुपमा संक्रमित गर्न सक्छ । यस सोधमा लेखिएको छ, यस भाइरसको संक्रमण हुने तीनमध्ये एक जनाको मृ- त्यु हुनसक्छ ।
वुहान विश्वविद्यालय र चाइना एकेडेमी अफ साइन्सेसका वैज्ञानिक र शोधकर्ताले नियोकोभभाइरसबारे चे-तावनी दिएका हुन् । वैज्ञानिकका अनुसार को-रोनाको नयाँ भेरियन्ट नियोकोभले मानिसलाई संक्रमित बनाउन केवल एक म्युटेसन भए पुग्छ । चीनका वैज्ञानिकले चे-तावनी दिएसँगै रुसका सरकारी भाइरोलोजी शोध केन्द्रले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छ ।
रुसका सरकारी भायरोलोजी शोध केन्द्रका अनुसार चीनका वैज्ञानिकले जारी गरेको आँकडा अनुसार उक्त भेरियन्ट अहिलेसम्म मान्छेलाई संक्रमित गर्न सक्षम छैन । उनीहरुले यसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै थप खोज अनुसन्धानको जरुरी छ ।
Previous नेपाल र मोरिसस आज आमन-सामने हुँदै, खेल अघि प्रशिक्षक अलमुताइरीले के भने ?
Next पिडित श्रीमतीको बयान : मलाई मेरा श्रीमानले आफ्नै साथी ल्याएर….